Zụta ugbu a Xiaomi Mi Band 6 maka euro 38 | Gam akporosis
Nwere ike ịzụta Xiaomi Mi Band 6 ọhụrụ maka euro 38
La ọhụrụ mara ọkwa Xiaomi Mi Band 6 smart mgbaaka awa ole na ole gara aga ma ugbu a ị nwere ike ịtụ Aliexpress ka ọ nweta euro 38.
Ohere di uku inwe a mgbaaka nke emelitere na-“niile na ihuenyo” na panel na nke ahụ na-ewepụ ọpụrụiche ahụ wepụrụ ohere iji nwee ike ịnụ ụtọ ya na ihuenyo. Ngwaọrụ ohuru nke rutere iji wedata ihe ndia; Ma anyi agaghi ewepu oke akwa nke ụdị Xiaomi Mi Band niile.
1 Dochie Xiaomi Mi Band 5
2 Ndepụta nke njirimara teknụzụ Xiaomi Mi Band 6
3 Zụta ya ugbu a na euro 38
Dochie Xiaomi Mi Band 5
Kwa afọ anyị nwere ụdị Xiaomi Mi Band ọhụrụ na oge a ihe kacha dị ịrịba ama ọhụrụ na-anọgide na ihuenyo ma ọ bụ obubọk na ogide niile ohere nke otu. Nke ahụ bụ, ọ ga-abụ "ihuenyo niile" na panel na-eweta ụdị Mi Band dị iche iche na ndabara.
Na ndị bu ụzọ, ihuenyo enwetaghị ohere niile dị na ihu, mana oge a Xiaomi arụ ọrụla ya. nyefee ahụmịhe zuru oke maka otu ihuenyo ma ọ bụ panel nke ahụ yiri ka ọ dịtụbeghị mbụ; dị ka ihe onyonyo nke ụlọ ọrụ China bipụtara maka ụbọchị mbipụta ndị a.
Ihuenyo buru ibu, nke nwere nkọ, na ọtụtụ pikselụ nke ruru pikselụ 326 kwa inch. Dị ka Xiaomi kwuru, ndị ihuenyo bụ 50% buru ibu karịa ụdị nke gara aga, yabụ ị nwere ike iji anya nke uche gị hụ data na-amasị gị n'ụzọ kachasị mma.
Ọhụrụ Mi Xiaomi Band 6 lekwasịrị anya na egwuregwu ọzọ nwere ike ịlele oxygen n'ime ọbara site na ntụgharị SpO2, na n'ezie, ọnụọgụ obi.
Ndepụta nke njirimara teknụzụ Xiaomi Mi Band 6
Ihuenyo AMOLED 1 56 "326 dpi 450 nkpuru
Sensọ Mkpụrụ obi na ikuku oxygen
Mgbochi mmiri Ogwe 50
Onwe ya Bọchị 14 (19 na ọnọdụ akụ na ụba)
ndị ọzọ Ihe ndọta
Ahịa 44.99 €
Dị ka anyị kwuru, anyị na-ahapụ ya na ihuenyo ahụ tolite 1,56 sentimita iji mee ka ọ bụrụ isi ihe ọhụrụ nke ụdị Xiaomi ọhụrụ a yana ị na-eji ụlọ akụ piggy jide ya. Ọnụahịa ahụ bụ € 44,99, ọ bụ ezie na site n'otu ụbọchị ahụ anyị nwere ike ịtụ ya site na Aliexpress iji nweta ya maka ihe karịrị 38 euro.
Ọzọ nke kasị dị ịrịba ama oganihu abịa customization ka ike nwere ihe dị ka ngalaba 130 na 4 pụrụ iche SpongeBob Squarepants ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ihuenyo Mi Band 6 bụrụ ihe na-adọrọ mmasị na ọchị.
Zụta ya ugbu a na euro 38
Omume ọma nke ọhụụ Xiaomi Mi Band 6 bụ na ọ ruru ọrụ 30 nke nwere ike ịghọta na ọnọdụ ọzụzụ na ikike ya ịchọpụta ihe omume 6 na-akpaghị aka: ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè na elliptical.
Anyị anyị ga-emesị hapụ otu ụdịEbe ọ bụ na nke na-abịa na NFC ma na-enye ohere ịkwụ ụgwọ mkpanaka, ọ gaghị ahapụ ókèala ndị China dịka ọ mere na ihe atụ gara aga. Agbanyeghị na anyị nwere olile anya na Xiaomi ga-eju anyị anya na nke a ma anyị nwere ike ijide Mi Band 6 na NFC.
La Xiaomi Mi Band 6 na-aga ahịa na China na Eprel 2 site na njikọ Aliexpress ị nwere ike nweta ya site ugbu a gawa ka ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-ewe gị ihe dị ka ụbọchị iri iji rute n'ụlọ gị na enweghị akwụ ụgwọ ụgwọ.
Njikọ ịzụta - Xiaomi My Band 6
Ọ ga-abịarute ebe a na .44,95 XNUMX, yabụ ị nọ n'oge kachasị mma iji chekwaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 7 inwe ya na nkwojiaka gị nke mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike ịzụta Xiaomi Mi Band 6 ọhụrụ maka euro 38
Ihe ngosi 13 kachasị mma maka gam akporo
Ihe kacha mma Harry Potter 16 kacha mma maka gam akporo